Akon’ny Ny Fifidianana Venezoeliana Tany Panamà · Global Voices teny Malagasy
Akon'ny Ny Fifidianana Venezoeliana Tany Panamà	Voadika ny 18 Oktobra 2012 4:06 GMT
Zarao: Taona vitsy lasa izay, nitombo ny isan'ny mpifindra monina Venezoeliana any Panamà. Noho izany, maro ireo Panameana sy Venezoeliana monina ao amin'io firenena io no nanaraka amim-pahamalinana ny fifidianana filoham-pirenena hatramin'ny 7 Oktobra. Araka ny habaka aterineto Info Sur Hoy [es]:
Venezoeliana 3.500 no monina manana taratasy ara-dalàna any amin'ny firenena Amerika Afovoany, araka ny Sampan-draharaha Nasionaly momba ny fifindra-monina any Panamà. Saingy Venezoeliana 86.815 no tonga ao amin'ity firenena ity tao anatin'ny 6 taona ary tsy nody intsony araka ny gazety Panamá América.
Nanomboka nifidy vao maraina be ireo Venezoeliana manana taratasy ara-dalàna, araka ny notaterin'ny El Venezolano [es], gazety miseho isan-kerinandro ho an'ny fiaraha-monina Venezoeliana any Panamà :
Nanomboka tamin'ny 6:15 maraina ny fifidianana tao amin'ny biraon'ny masoivoho, nisy efitra telo namboarina manokana ho amin'io fotoana io. Tsotra sady voalamina tsara ny zava-drehetra hatramin'io andro io. Tonga tamin'ny endrika feno fanantenàna, faly afaka mampiasa ny zony hifidy ao amin'io firenena io ireo Venezoeliana. Nanomboka tonga tany amin'ny masoivoho vao maraina be ry zareo miaraka amin'ny kafe, rano fisotro, rano, sakafo, ary ny karam-panondrony.
Venezoeliana nifidy tany Panamà ny 7 Oktobra, 2012. Sary nozaraina tamin'ny @ElVenezolanoP tamin'ny Twitter.
Raha vao fantatra izay mpandresy amin'io fifidianana io, vetivety ny fahatongavan'ny fanehoan-kevitra amin'ny tambazotra sosialy, izay hanadihadian'ny Panameana sy ny Venezoeliana ny valim-pifidianana. Ohatra, Diego de Obaldia (@DeObaldia [es]), Venezoeliana iray monina any Panamà, somary nananihany :
(@DeObaldia) Ho hitantsika iza no mahefa kokoa : ny ratsin'i CHAVEZ sa ny fahaiza-mandray vahinin'i PANAMA …
Ny hafatra amin'ny Twitter miaraka amin'io feo io dia nanomboka nandeha tamin'ireo hafatra famporisihina sy fampanantenana ho an'ny Venezoeliana, na dia misy aza ireo mampitandrina ny amin'ny fisian'ireo andiana mpifindra monina vaovao. Ny tatitr'i La Estrella de Panamá[es] :
Aorian'ny fandresen'i Chávez hisy andianà mpifindra monina ho tonga indray. Raha toa ka tanteraka izany, dia hisy vokany tsara amin'ny toe-kerena Panameana, araka an'i Felipe Chapman, manam-pahaizana momba ny toe-karena sady mpiara-miasa amin'ny orinasa Indesa.
Heverina fa firenena manana kolontsaina isankarazany Panamà, izany no manazava ny antony hankasitrahan'i Giordano C (@GiordanoCQ) [es] ny fandraisan'i Panamà ireo Venezoeliana, sy ny antony hilazany ny fisian'ny andianà mpifindra monina vaovao :
(@GiordanoCQ) Mahatsapa tsunami Venezoeliana mizotra mankany amin'ny PTY [marika ahafantarana ny seranampiaramanidin'ny tanànan'i Panama], noho ny fanokafan'i Panamà ny varavaranareo ary manao anay ho tahaka ny any an-tanindrazana…
Ho an'ny Panameana sasany, ny fifidianana any Venezoela dia taratry ny fifidianana Filoha any Panama ho avy manaraka eo (Ny fifidianana indray ny Filoha am-perin'asa dia tsy araka ny lalàm-panorenana any Panamà ). Ny mpisera ‘ec’ dia manadihady ao amin'ny Foros Slot [es]:
Amin'ny farany, mino aho fa io zavatra io dia hampiseho fa ireo firenena izay manana demokrasia tsy tsara fototra tahaka ny antsika dia tsy tokony hamela ny fitohizan'ny fitondran'ny Filoha am-perinasa, satria mora lalaovina ny vahoaka.
Efa alinalina ihany, tamin'ny Alahady, 7 Oktobra, ny Panameana Yoli Moreno (@_YoliM_) [es] dia nampahatsiahy ireo mpanaraka azy ny amin'ny maha-zava-dehibe ny fanarahana akaiky ireo fifidianana ireo :
@_YoliM_:Mamaky bitsika vitsivitsy aho ary malahelo. Rehefa manomboka misaina malalaka ianao dia hahatsapa fa hahazo antsika izay miseho any amin'ny firenen-kafa.
Tantaran'ny Amerika Latina farany 1 andro izayKolombiàFotoana izao Hampitsaharana Ny Didimpoitram-behivavy Ao Amin'ny Firenena Tokana Ao Amerikana Latina Mbola Ahitana izany